🥇 ▷ Star Citizen waxay u dabaal degeysaa taariikh cusub oo ay dadweynihii isugu soo baxay bannaanka hore ✅
Star Citizen waxay u dabaal degeysaa taariikh cusub oo ay dadweynihii isugu soo baxay bannaanka hore
Xiddig Star Waxay ku kortay iyada oo aan la qiyaasi karin muddo. Laga soo bilaabo ololihiisii ​​doorashada ee Kickstarter ee hada fog, kaas oo billowday Oktoobar 2012, cinwaanka Ciyaaraha Cloud Imperium wuxuu si weyn u kobcay, isagoo ku sii kordhaya dhinac kasta oo la malayn karo iyo kordhinta cabbirkeeda soo jeedinteeda heerar ah, bilowgii, xitaa ma aysan ahayn xitaa kuwo la malayn karin. Hadda, sheyga ayaa ku jira nooca alfa 3.6 isla markaana, isku mar, maalgelinta ayaa durba gaadhay horumar cusub.
Arintan, waxaan cadeyneynaa in ololaha lacag aruurinta uu hada kujiro in kabadan 232 milyan oo doollar, gaar ahaan gudaha $ 232,150,738. Tiradaan lama taabtaanka ah, dhanka kale, waa la mahadiyay 2,360,079 isticmaale ka diiwaangashan wax ku biiriyay, ilaa xad ah ama ka yar, dhammaystirka cinwaanka, oo ka tarjumaya bulshada ballaaran ee wax soo saarka lagu tirinayo sababta oo ah, xitaa in kasta oo waqtiga horumarka lagu jiray, taageerada ayaa sii socota, maaraynta in lagu daro hal milyan oo doolar laba toddobaad ka hor ilaa maanta.
Dhanka kale, waa in la xasuustaa taas Xiddig Star waxay ku heli doontaa qaabkeedii ugu dambeeyay ee PC taariikhda aan wali go’aan laga gaarin kahor 2020, halka Squadron 42, qaabkeeda ololaha, wuxuu gali doonaa beta rubuc-sannadeedka labaad isla isla sanadkaasama. Sidoo kale, si aan u dhammeysanno, waxaan kaaga tageynaa fiidiyowgii horey loogu xirnaa, kaas oo istuudiyaha uu ku soo bandhigayo safar faahfaahsan, labadaba bannaanka iyo gudaha, markabka Asal ahaan 890 Jumlo, oo horeyba u ahaa hormuudka fiidiyowyo kale dhacdooyin hore.
Star Citizen waxay u dabaaldegeysaa taariikh cusub oo ay dadweynihii isugu soo baxeen bannaanka hore ee Ronald Goncalves